Abiy Ahmed oo Dagaal culus qaaday (Jabhadda Tigray oo laga saarayo degaanada Axmaarada iyo Cafarta) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya ee mar kale xilka loo doortay ayaa qaaday weerarradii ugu cuslaa oo uu doonayo inuu Jabhadda Tigray uga saaro degaanada ay ka qabsatay maamullada Amxaarada iyo Cafarta.
Dagaalka oo toddobaadkan bilowday ayaa sii xoogeysanaya, waxaana socda weerarrocirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada Itoobiya iyo xulafadooda la beegsanayaan ciidamada Jabhadda ee gobolka Tigray, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidammada Tigreega.
Afhayeenka Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray-ga (TPLF) Getachew Reda ayaa sheegay in milateriga Itoobiya iyo xulafadiisa ka soo jeeda gobolka Amxaarada ay dhowr jiho kula dagaallamayaan ciidamada Tigreega, gaar ahaan labada gobol ee Amxaarada iyo Canfarta oo deris la ah Tigray.
Previous articleShir ay Muqdisho ku lahaayeen Dowladda Somaliya iyo Midowga Afrika oo la isku mari waayey
Next articleMaleeshiyada Ahlu suna oo dhufeyso ka qotay gudaha Guriceel iyo ciidamada Galmudug oo kusii jeeda